‘दशैं मनाउन नपाउने म मात्र हो र? – Health Post Nepal
२०७७ कार्तिक ७ गते ८:०२
दशैमा घरजाने रहर कसको नहोला र? तर परिस्थितिले प्रतिकूल छ ।
अध्यायन तथा रोजगारीका सिलसिलामा उपत्यकाबाहिरबाट आएर बसोबास गर्नेहरु पनि धेरै घर फर्किन पाएका छैनन् । यातायात सहज नभएर रोगको डर विभिन्न कारणले ।
भक्तपुर नै घर भएकी स्टाफनर्स मञ्जु छुकां पनि यसपटक घर जान पाउँदिनन् । कारण महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना महामारी ।
उनी भक्तपुर नगरपालिकाले संचालन गरेको आइसोलेसन सेन्टरमा कार्यरत छिन् ।
तीन वर्षदेखि नर्सिङ पेशामा होमिएकी २४ वर्षिय मन्जुको घर भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर ३ दरवार स्क्वायर नजिकै हो ।
काम गर्ने ठाउँ भक्तपुरको ब्रम्हायणी ।
कार्यस्थल र घरको दुरी केही किलोमिटर मात्रै छ । चाडवाड नजिकिएसँगै घर जान मन त लाग्छ, तर चाडभन्दा ठूलो उनको जिम्मेवारी हो । सेवा क्षेत्रमा प्रवेशकै लागि उनले चुनेको पेशा हो नर्सिङ ।
उनी अहिले कोभिड १९ सँग लडिरहेका संक्रमितहरुको हेरचाहमा खटिएकी छिन् । उनी बिरामी लिनका लागि बाहेक उनी आइसोलेसन सेन्टरबाट निस्किन पाउन्नन ।
आइसोलेसन सेन्टर सुरु भएदेखि नै मन्जुको दैनिकी यतै वितिरहेको छ । ‘सुरुसुरुमा एकदुई दिन गाह्रो महसुस भएको थियो । तर विस्तारै वानी पर्यो’ उनी थप्छिन् ।
अहिले आइसोलेसनमा बसेदेखि बाहिर गएकी छैनन् । पहिलो लटमा आइसोलेसन ७ दिन पुरै दिनरात त्यही बसेर ड्युटी गरिन् ।
त्यसपछि भक्तपुर नगरपालिकाले आइसोलेसनमा बसेका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई बनाएको क्वारेन्टाइन्मा ७ दिन बसिन् । पिसिआर रिर्पोट नेगेटिभ आएपछि उनी घरमा गएकी थिइन् ।
घरमा जाँदादेखि ड्युटी ज्वाइन नभएसम्म होम आइसोलेसनमा नै बसेको उनी बताउँछिन् । कार्तिक १ देखि दोस्रो ड्युटी सुरु भएको छ ।
त्यसमा पनि अन्य सहकर्मी स्वास्थ्यकर्मीहरुमा पनि कोरोना संक्रमित भएका कारण उनको ड्युटी समय पनि ७ दिनबाट १० दिनको भएको छ ।
उनको ड्युटी त कार्तिक १० मा सकिन्छ, तर उनी घर गइहाल्न पाउँदिनन् । त्यसको ७ दिन क्वारेन्टाइनमा बसेपछि रिपोर्ट नेगेटिभ आएमात्रै घर जान मिल्छ । होमआइसोलेसनमा थप १४ दिन बस्नुपर्छ ।
आइसोलेसन सेन्टरबा ड्युटीमा आउँन फोन आउँदा बाबुआमा र दाईलेसमेत अमिलो मन पारे ।
‘दशै आइसक्यो, नगएपनि हुन्न? बरु त्यसको साटो घर फर्किन मिल्ने ड्युटी मिलाइदिनु भनन’ दाईले मन्जुलाई भनेका थिए ।
तर, उनले आमाबुबालाई सम्झाएर काममा फर्किइन् ।
‘त्यसो त यसपालीको दशै कोरोनाकै कारण पहिला जस्तो चहलपहल छैन ।’ उनी चित्त बुझाउँछिन् ‘फेरी दशैं मनाउन नपाएको म मात्र पनि होइन् नि!’
उनी र उनीजस्ता हजारौं नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीहरु यसरी नै काम गरिरहेका छन् । भाइरस जित्न, संक्रमितको ज्यान जोगाउन । तर आम सर्वसाधारणले सामान्य स्वास्थ्य मापदण्ड पनि नअपनाएको देख्दा उनी दुःखी हुन्छिन् ।
उनी थप्छिन् ‘संक्रमित भएर आइसोलेसनमा बस्नु भएका आमाबुवाले पनि त दशैं मनाउन पाएको छैनन् ?’
दशैं मनाउन नपाएको दुःखसँगै पेशागत अभ्यासमा यति ठूलो महामारीमा सेवा गर्न पाउनु पनि ठूलो सिकाई हो । हो, तर दशैंमा छुट्टिएर बस्नु परेको चाँही पहिलो पटक हो ।
यसअघिको दशैंमा उनी साँमाखुसीको ग्रीनसिटी अस्पतालमा काम गर्दा ड्युटी सिध्याएरै पनि दशैं व्यवस्थापन गरेकी थिइन् ।
‘बाल्यकालमा दशैं भनेको त नयाँ लुगा लगाउँने, मामाघर जाने हो भनिजस्तो लाग्थ्यो’ उनी मुस्कुँराउँदै थप्छिन्, ‘यसपटक नयाँ लुका किन्न बजार जान भएन, मामा घर जान पनि मिल्दैन, त्यसले दशैं पनि भएन,’
हालखबर सोध्न घरबाट फोन आउँदा होस् या आफै फोन गर्दा उनी घरायसी कुरा भन्दा स्वास्थ्य सल्लाह नै बढि दिन्छिन् । ‘महामारीमा आफ्नो मात्र स्वास्थ्यको ख्याल नगरी आफूबाट अरुलाई सर्नबाट पनि जोगाउनुपर्छ’ उनले सम्झाउने गर्छिन् ।